Heart Museum: ဖန်ခွက်အသည်း
***ဘယ်လိုမှသတိမရသင့်သော သူတယောက်သို့ အမှတ်တရ***
Posted by Heartmuseum at 2:48 PM
မလွမ်းသင့်ပေမယ့် လွမ်းခွင့်ရှိပါတယ် ဗျာ
(ကို) အညတရ ရေ..ကဗျာက ထိတယ်ဗျာ
ဟားဟား လူပျိုကြီး ရောဂါ ဟောင်းပြန်ထနေတယ်း) သွပ်သွပ်သနားလိုက်တာဗျာ ...........။
အန်ချလိုက် အန်ချလိုက် ဘကြီးတို့ တုန်းကလည်း ဂလိုပဲ ခံစားခဲ့ရတယ် ဟီးးးး ဘီယာတွေသောက်နေတယ်ထင်တယ် ဒူးတော့မထောက်ပါဘူးဗျာ အောက်ကျတယ် အခုခေတ်က အုန်သျှစ်တစ်တင်း နှမ်းနှစ်တင်းခေတ် ဒို့ ကတော့ မာမာပဲး)။
P>S =မသိတာရှိရင်လာမေးနိုင်တယ် နည်းလမ်းတွေပေးမယ် အသဲကွဲဖြေဆေးရှိတယ် ။
ကိုအညတရရေ... ဖတ်ပြီး ငြိမ်ကျသွားတယ်။ “အခုတော့လေ........ အာရုဏ်တက်မှာ စို့းရွံ မျက်စိစုံပိတ် ကြိတ်မှိတ်အိပ်တတ်ပြီ။” ဆိုတာလေးကို တကယ်ခံစားရပါတယ်။ “***ဘယ်လိုမှ သတိမရသင့်သော သူတယောက်သို့ အမှတ်တရ***” ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို တော်တော်လေး သဘောကျမိပါတယ်။ သတိရခြင်းဆိုတာ သင့်မသင့်ကို အရင်စဉ်းစားခွင့်ပြုတဲ့ အရာမှမဟုတ်တာ။ သတိရပြီးမှသာ...။ ဘာပဲပြောပြော ကဗျာကောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါပဲ ကိုအညတရရေ... ပျော်ရွှင်ပါစေ...
ဖန်ခွက်ထဲက ပယင်းရောင်အရည်တွေတော့ မဟုတ်ပါဘူးနော် :P
ကဗျာက ခံစားရတယ် သတိမရသင့်ပေမယ့် လွမ်းမိတာအပြစ်မရှိပါဘူးဗျာ
ရင်ထဲကလာတဲ့ကဗျာလေးမှန်းသိသာတယ်... ခံစားချက်တူတော့ တကယ်ထိတယ်ရှင်.. မဗေဒါကတော့မိန်းကလေးဆိုတော့ ငိုနေမိတော့တာပဲ.. သတိမရသင့်တဲ့သူတွေ.. သတိမရသင့်တဲ့အရာတွေ.. သတိမရအောင်ကြိုးစားလေ သတိရလေပါပဲ.. ဒါပေမဲ့လဲလေ.. သူတို့ကတော့ ကိုယ့်ကိုခုလိုခံစားရအောင်လုပ်ဖို့တောင် အဖတ်လုပ်ပြီးသတိရနေကြတာမဟုတ်ဘူးလေ.. ဒီတော့ သတိမရအောင်ပဲ နေရတော့မှာပေါ့နော်..
ကဗျာက ထိတယ် ကိုဟတ်ရေ heart ဆိုတဲ့အတိုင်းပါဘဲ။ မီးမပိတ်ပဲနဲ့ အိပ်ရင် ကျောင်းမှာသင်ရတယ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖျက်စီးတာတဲ့။ ဟိဟိ
... ခံစားချက်ချင်းလာတူနေတယ်ဗျို့... ဒီလိုပါပဲ ထားတဲ့သူက ထားသွားခဲ့ပြီ.. ကျန်တဲ့သူက လွမ်းနေဖို့ပဲတက်နိုင်တယ်..ကဗျာလေးက ကောင်းတယ်ဗျို့..:D
ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် အစ်ကိုရာ..။ အစ်ကို့ အဖြစ်ကိုနဲနဲသိနေတော့ ကျွန်တော်ပိုနားလည်လို့ ရပါတယ်...။ :( သြော်....ဖန်ခွက်အသည်း တဲ့လားဗျာ။
ဖန်ခွက်ကို ခုမှ တွေ့မိတယ်. . .
(ရေမော့ပြီးမှပဲ . . အဲလေ .. ခုမှ တစ်ခုကျော်ဖတ်သွားတာ သေချာကြည့်မိတယ်။ )
အာရုဏ်တက်မှာ စိုးတယ်. .
နေ၀င်မှာ စိုးတယ် . .
၀ဋ်လည်မှာ စိုးတယ် . . .
တခါတလေမှာ ဘာလို့ ရွေးချယ်မှုတွေ လုပ်ရတာလဲ မသိဘူး။
အသည်းကွဲနေတာ ကို သနားလို့ မစတော့ပါဘူး...။